Andranganala Brieville Misy Sinoa tonga mitrandraka an-tsokosoko…
Velon-taraina tanteraka ireo mponina any amin’ny faritra Andranganala, Brieville amin’izao fotoana izao.
Raha araka ny vaovao azo mantsy dia misy Sinoa tonga mitrandraka harena ankibon’ny tany any an-toerana efa ho roa herinandro izao. Miaraka amina fitaovana lehibe sy harifomba izy ireo ary manao toho-drano. Voakitika vokatr’izany ny rano fisotro madio hampiasain’ny mponina ka mahatsiaro ho sahirana izy ireo. Voatery mandeha dia an-tongotra lavitra indray vao mahita rano hampiasaina. Raha araka ny vaovao azo hatrany moa dia tonga fotsiny tsy nisy fampahafantarana ireto Sinoa mpitrandraka ireto ka mampiahiahy ny mponina. Manao antso avo amin’ny fanjakana izy ireo, araka izany, mba hijery akaiky ny zava-misy. Tafiditra ao amin’ny faritry ny kraomita Malagasy moa ity toerana trandrahan’ny sinoa ity, hoy hatrany ny vaovao.